Dimoqraadi - Wikipedia
Dimuqraadiyad (Af Ingiriis : Democracy; Reer aw xasan waa beel kamid ah‎; asalka ereyga ka yimid Af Giriig: δημοκρατία dèmos (δήμος) + kratos (κράτος)) waa nooc ka mid ah nidaamka maamulka dowladaha iyo qaab kale oo ka mid ah awood-qeysbiga taasi oo awooda oo dhan ay Gacanta Ugu jirto shacabka. Dimoqraadiyad waa eray giriik ah oo micnihiisa ah "xukunka waxaa leh Shacabka". Dimoqraadiyadu waxey ka koobantahay mabaadi badan laakin waxaa ugu muhiimsan labo mabda oo kala ah :- 1.Dhamaan Bulshada ku nool wadanka waxay xaq u leeyihiin Talada Dalka. 2.iyo in dadku yihiin Kuwo xor ah oo cabiri kara fikirkooda siyaasadeed.
1 Waa maxay dimoqaraadiyad?
1.1 1. Isbedelka xukuumadaha
1.2 3. Xuquuqda ay dimoqaraadiyadda siiso muwaadiniinta.
1.3 4. Sharciga ayaa taliya
Waa maxay dimoqaraadiyad?[wax ka badal | wax ka badal xogta]
Qoraalkaan wuxuu sharaxayaa waxa ay dimoqaraadiyadda tahay. Qoraalkaan markii hore wuxuu ku qornaa af ingiriis oo waxaa qoray barofasoor Mareykan ah oo lagu magacaabo Larry Diamond oo Jaamacadda Stanford University ka dhiga cilmiga siyaasadda. Qoraalkaan wuxuu kaa caawin doonaa fahamka waxa ay dimoqaraadiyadda tahay.
Dimoqaraadiyadda waxay ka kooban tahay afar qeybood oo asaasi ah. Afartaan qeybood waa tiirarka ugu muhiimsan ee dimoqaraadiyadda.
1. Dimoqaraadiyadda waa nidaam siyaasadeed oo ay xukuumadaha isku bedelaan ka dib doorasho xor ah oo caddaalad ah.
2. Waa nidaam siyaasadeed oo ay dadweynahu si firfircoon aga qeyb qaataan siyaasadda.
3. Waa nidaam Dhowra xuquuqda bini’aadanimo ee muwaadiniinta oo dhan
4.Waa nidaam uu sharcigu isku si u qabto qof walba
Waxaan halkaan hoose sharaxaad kooban ka bixinayaa qeyb walba oo ka mid ah afarta qeybood ee ah tiirarka dimoqaraadiyadda.
1. Isbedelka xukuumadaha[wax ka badal | wax ka badal xogta]
Dimoqaraadiyadda waa nidaam ay dadku ku doortaan hoggaamiyaashooda oo ay na dadku kula xisaabtamaan hoggaamiyaashooda sida ay shaqada iyo siyaasadda u wadaan.
Dadka ayaa go’aansada ciddii ku matali lahayd Dawladda ayaga oo kala dooranaya xisbiyo iyo shaqsiyaad ku tartamaya doorasho joogto ah oo xor iyo caddaalad ah.
Xukuumadda waxay ku dhisan tahay rabitaanka dadweynaha.
Dimoqaraadiyadda waa nidaam ay dadweynuhu xor yihiin. Dadweynaha ayaa leh awoodda ugu badan ee siyaasadeed ee dalka.
Awoodda waxay ka timaataa dadka, madaxduna waxay awoodda hayaan wakhti go’an.
Sharci cusub waxaa la suubin karaa haddii baarlamaanka intiisa badan ay ogolaadaan.
Dadweynaha xor ayey u yihiin in ay daliilaan madaxda ay doorteen iyo sida ay shaqada u wadaan.
Madaxda la doortay waa in ay u dhaga furnaadaan dadweynaha oo ay dhageystaan codsiga, talooyinka iyo baahida dadka. Waxna ka qabtaan baahida dadka.
Doorashooyinka waa in ay u dhacaan sida joogtada ah oo uu sharcigu dhigayo. Madaxda ma kororsan karaan wakhtiga aga dhiman ka degista jagada ayaga oo aan mar labaad doorasho rabitaanka dadweynaha soo gelin.
Xisbiyada siyaasadda iyo musharaxiinta waxay xaq u leeyihiin in ay si xor ah ugu ololeeyaan in la doorto. Waxayna xaq u leeyihiin in ay qorshahooda soo bandhigaan ayagoo adeegsan kara warbaahinta.
Goobjoogayaasha madaxa bannaan waa in loo ogolaado in ay la socdaan qaabka ay doorashada u dhacayso iyo qaabka loo tirinayo codadka si loo xaqiijiyo in doorashada ay tahay mid aysan ku jirin musuqmaasuq, cabsi iyo khiyaano.
Waa in la helo guddi madax bannaan oo aan u eexaneyn qolo si ay u halliyaan wixii muran ah oo ka dhasha natiijada doorashada.
3. Xuquuqda ay dimoqaraadiyadda siiso muwaadiniinta.[wax ka badal | wax ka badal xogta]
Muwaadin walba wuxuu leeyahay xuquuq asaasi ah oo ay dowladdu ka qaadan karin.
Waxaad xaq u leedahay in aad fikradaada yeelato. Waad na sheegi kartaa fikradaada ama qori kartaa.
Qofna xaq uma laha in uu kuu sheego waxa aad ku qasban tahay in aad ku fakarto, rumeyso, sheegto ama aadan sheegin.
Qof walba wuxuu xor u yahay in uu diintiisa ku dhaqmo. lakiin waxaad xortahay markaad islaamnimadaada ku dhqanto
Qof walba wuxuu xaq u leeyahay in uu haysto dhaqankiisa xattaa hadduu ka tirsan yahay dadka laga tiradada badan yahay.
Warbaahintu waa xor, waana in ay tahay mid soo bandhigta aragtiyada kala duwan ee dadka.
Waxaad kala dooran kartaa in aad warka iyo warbixinada ka hesho warbaahinno kala duwan.
Waxaad xaq u leedahay in aad ku biiri kartid ururkii aad doonto ama aad abuurto urur cusub.
Waxaad xaq u leedahay in aad dalka gudihiisa ku dhex safri kartid iyo haddii aad doontid na ka bixi kartid dalka.
Waxaad xaq u leedahay si nabad ah in aad u mudaharaado iyo in aad ka mudaharaado falalka ay Dawladda ku kacdo. Qof walba waxaa ku waajib ah in xuquuqahaan uu ugu dhaqmo si nabad ah oo dhowreysa sharciga iyo xuquuqda dadka kale.
4. Sharciga ayaa taliya[wax ka badal | wax ka badal xogta]
Dimoqaraadiyaddu waa nimaad uu sharcigu ugu sarreeyo dalka ee shaqsiyaad uguma sarreeyaan dalka.
Dadka dhammaantood way u siman yihiin sharciga. Qofna laguma takoori karo diintiisa, qabiilkiisa, jinsiyaddiisa ama jaadka uu yahay (nin ama naag)
Qofna looma xiri karo ama looma tarxiili karo go’aan shaqsi daraadiis.
Haddii lagu xiro waxaad xaq u leedahay in aad ogaatid waxa lagugu eedeeyay, lagaana soo qaado in aad tahay dambi laawe illa ay maxkamad ay ku xukunto si sharciga waafaqsan.
Qof walba oo dambi lagu soo eedeeyay wuxuu xaq u leeyahay si dhakhso ah in la geeyo maxkamad caddaalad ah oo dadweynaha ka dhaxeysa. Muddada ay socoto maxkamadda waa in ay tahay muddo gaaban.
Qofna lama cansuuri karo ama laguma qaadi karo dambi ayada oo aan loo cuskanayn sharci horay u jiray.
Qofna sharciga kama sareeyo xatta boqor ama madaxweyne la doortay.
Sharciga waxaa si caddaalad ah oo eexla’aan ah u fuliya maxkamado ka madax bannaan laamaha Dawladda.
Silic-dilka, ciqaabta naxariis darrada ah oo ka baxsan bini’aadanimada waa mamnuuc.
Awoodda Dawladda waxay leedahay xad oo waxaa xad u ah sharciga. Shaqsi ka tirsan Dawladda kuma xad gudbi karo xadka uu sharcigu dhigay.
Madaxda Dawladda, madaxweynaha ama xisbiyada siyaasadda midkoodna uma sheegi karo garsoore maxkamad sida uu go’aan aga gaari lahaa dacwad ama kiis.
Madaxda Dawladda iyo shaqaalaha Dawladda awooddooda uma adeegsan karaan si musuqmaasuq ku jirto. Maxkamado madax bannaan iyo guddi madax bannaan ayaa ciqaabaya musuqmaasuqqa ayagoo aan tixlegin siineyn cidda uu yahay qofka musuqmaasuqqa geystay xatta haddii uu yahay madaxweynaha.
Intaas waxaa ku dhan sharraxaadda kooban ee afarta qeybood ay dimoqaraadiyaddu ka kooban tahay. Qoraalkaan waxaa turjuma maxamed Ahmed mohamed
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Dimoqraadi&oldid=202429"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 18 Juun 2020, marka ee eheed 04:14.